China agglomerator pelletizing machine ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူများ | ကြွယ်ဝသောစက်ယန္တရား
agglomerator pelletizing စက်
Conveyor: PP PE ရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်အလွှာများကို compactor / feeder ထဲသို့သယ်ဆောင်ပါ။ PE film compactor - ကြိတ်ခွဲခြင်းနှင့်ချုံ့ခြင်းနှင့်ဖိနှိပ်သောဖိအားများကို extruder အဖြစ်ဖိအားပေးခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားကိုမြင့်မား။ တည်ငြိမ်စေသည်။ Extruding system - ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများနှင့်ကုန်ခန်းနေသောဓာတ်ငွေ့။
၁ စွမ်းရည် - ၆၀ ကီလိုဂရမ် / နာရီ ၁၀၀၀ ကီလိုဂရမ် / နာရီ
2. အမျိုးအစား: ရေ - လက်စွပ်လုံးလေးနှင့်ရပ်တည်အမျိုးအစား
pp pe ရုပ်ရှင် pelletizing လိုင်း / ပလပ်စတစ်ရုပ်ရှင် granulator
ဒီရေ - အအေးတစ်ခုတည်းဝက်အူပလပ်စတစ်လုံးလေးပြုလုပ်စက်သည်အဆင့်တစ်ခုဖြစ်သည့်ပလပ်စတစ်သစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုးသည့် pelletizer ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် PP, HDPE, LDPE, LLDPE Film EVA နှင့် PE အမြှုပ်များနှင့်သန့်ရှင်းသောယက်၊ အိတ်ပစ္စည်းများ၊ စသည်တို့။ ရုပ်ရှင်ကို compressor ဖြင့်ဖိ။ pelleted ပြုလုပ်နိုင်ပြီး crusher machine မလိုအပ်ပါ။
၁။ ဝက်အူနှင့်စည်ကို ၃၈CrMoAlA သို့မဟုတ် Bi-metallic ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးဝင်ပေါက်ပါးစပ်ကိုအထူးသတ္တုစပ်ဖြင့်ကုသသည်။ အလွန်ခိုင်ခံ့ပြီးသက်တမ်းရှည်သည်။
၂။ လွယ်ကူစွာလည်ပတ်နိုင်ခြင်း - ၎င်းသည်အလိုအလျောက်စဉ်ဆက်မပြတ်အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်နိုင်မှုရှိခြင်း၊ ကောင်းစွာချိန်ညှိပြီးနောက်အလုပ်သမား (၁) ယောက် (သို့) ၂ ယောက်သည်ဤစက်ကိုလည်ပတ်ရန်၊
၃။ ပြန်လည်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပြီးနောက်အသုံးပြုခြင်းအတွက်ကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးခြင်း - ယခုဤစက်သည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအရင်းအမြစ်နှင့်ရေတွင်ပိုမိုစီးပွားရေးကျသည်။ ဤစက်၏ကြာမြင့်စွာအလုပ်လုပ်ရသောအချိန်တွင်၎င်းသည်စွမ်းအင်အမြောက်အများကိုကယ်တင်နိုင်သည်။
4. မြင့်မားသောထုတ်လုပ်မှု၊ ကြာရှည်စွာလည်ပတ်နိုင်မှုနှင့်ဆူညံသံကိုလျှော့ချခြင်း - ၎င်းသည်ယနေ့ခေတ်တွင်အကောင်းဆုံးသောစွန့်ပစ်ပစ္စည်းပလတ်စတစ်သစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုးနိုင်သောစက်ဖြစ်သည်။
ဒီစက်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့မှာ ၁၀ နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံအများကြီးရှိတယ်၊ ငါ့သူငယ်ချင်း၊ မင်းကိုအီးမေးလ်ပို့လိုက်ရင်မင်းကိုမင်းရဲ့လိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်ပြီးတန်ဖိုးထားတဲ့အကြံဥာဏ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
ရေလောင်းစက်နှင့်အတူ Agglomerator စက်: PE PP ရုပ်ရှင်နှင့်ယက်အိတ်များကိုပြန်လည်အသုံးပြုသည်။
Agglomerator Pelletizing Machine အကြီးစား PP film ပွားစက်ပလပ်စတစ် granulator
အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရည်အသွေးနှင့်အတူ 2. စစ်မှန်သောထုတ်ကုန်
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်အချိန်တိုအတွင်းတွင် ၄ င်း၏စီစဉ်ထားသောထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ကိုထောက်ပံ့ပေးပါသည်
ချွတ်ယွင်းသော Semi-Manufacturing များအားလုံးကိုထပ်မံကုသရန်သို့မဟုတ်ငြင်းပယ်ရမည်။
ရှေ့သို့ အပြိုင်အမွှာဝက်အူ extruder
နောက်တစ်ခု: PP အရည်ပျော်မှု
တစ်ခုတည်း degas extruder စက်
SJ150 pelletizing extrusion စက်